इटाली र स्पेनमा कोरोनाको महामारी फुटबलबाट ! – Entertainment Khabar
इटाली र स्पेनमा कोरोनाको महामारी फुटबलबाट !
काठमाडौँ — कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सबैभन्दा प्रभावित तीन देशमध्ये दुई हुन्, इटाली र स्पेन । त्यसमध्ये इटालीमा पनि सबैभन्दा नराम्रोसँग यो भाइरसले कुनै एक सहरलाई बढी प्रभावित पारेको छ भने त्यो हो, बेरगामो । यसै सहरका मेयर जर्जियो गोरीले दाबी गरेका छन्, युरोपेली च्याम्पियन्स लिगमा एटलान्टा र भ्यालेन्सियाबीच मिलानको सानसिरोमा भएको खेलकै कारण इटाली र स्पेनमा कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको हो ।
च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको खेलका लागि एटलान्टाले भ्यालेन्सियाको आथित्य गरेको थियो र खेल मिलानको प्रसिद्ध सानसिरो मैदानमा भएको थियो । एटलान्टाको आफ्नै घरेलु मैदान पुनर्निर्माणबाट गुज्रिरहेको हुनाले उसले इन्टर र एसी मिलानको सानसिरोमा खेलेको थियो । फेब्रुअरी १९ मा भएको खेल हेर्न सानसिरोमा त्यस दिन ४४ हजारभन्दा बढी दर्शकको उपस्थिति थियो । गोरी के मान्छन् भने कम्तीमा यही खेलका कारण उनको सहर सबैभन्दा प्रभावित रह्यो ।
इटालीमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसबाट संक्रमित यसै सहरमा छन् । अहिलेसम्म त्यहाँ ६ हजार ७ सय २८ भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यहाँ मृत्युदर पनि अत्यधिक रहेको छ । एटलान्टा बेरगामो सहरकै क्लब हो र उसले पहिलोपल्ट च्याम्पियन्स लिग खेलिरहेको हो । यसअघि इटालीको घरेलु फुटबलमा खासै सफल नरहेको यस क्लबले पछिल्ला केही वर्ष भने राम्रो खेलिरहेको छ र यसैक्रममा यसपल्ट च्याम्पियन्स लिगको क्‍वाटरफाइनल पनि पुगिसकेको छ ।
मेयर गोरीले भनेका छन्, ‘त्यो खेल मानवीय जैविक बमजस्तै रह्यो । त्यति बेला कसैले पनि अनुमानसमेत गर्न सकेन, यसको प्रभावित कति धेरै खराब हुन सक्छ भनेर । त्यतिबेला भाइरस त्यस रंगशालामा पुगिसकेको थियो भने ४० हजार यसबाट संक्रमित भएको हुनु पर्छ । यो खेल हेरेपछि दुवै टिमका समर्थक आ–आफ्नो सहर फर्के र एकले अर्कोलाई भाइरस सार्ने काम गरे ।’ त्यस खेलमा एटलान्टाले ४–१ को प्रभावशाली जित निकालेको थियो ।
भ्यालेन्सियाका समर्थकले कोरना भाइरस आफूसँग स्पेन लगे । भाइरसको उद्गमस्थल मानिएको चीनको वुहानपछि इटाली सबैभन्दा बढी प्रभावित छ र चीनको तुलनामा यहाँ बढी मृत्यु पनि भएको छ । इटालीमा यो समाचार लेखिरहँदा ६ हजार ८ सय २० को मृत्यु भइसकेको छ भने स्पनेमा मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ९ सय ९१ पुगिसकेको छ । बेरगामाको स्थानीय चिकित्सकले पनि मेयरको दाबीको समर्थन गर्दै त्यही खेलबाट भाइरसको संक्रमण बढेको मानेका छन् ।
ती चिकित्सकले ‘अफ द बल’लाई भनेका छन्, ‘हाम्रो सहरका सिनियर चिकित्सकहरू पनि के मान्छन् भने त्यस खेल वास्तवमै जैविक बम सावित भएको छ । त्यस खेलमा एटलान्टाको जितपछि क्लबका समर्थकले खुसीयाली मनाउँदै आफ्नो घर फर्केका थिए । त्यति बेला कसैले पनि यो भाइरसको संक्रमणले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिबारे अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । फेब्रुअरी १९ को त्यस खेलसम्म इटालीमा यस भाइरसबाट कसैको पनि मृत्यु भएको थिएन् ।’
त्यसको तीन सातापछि सात दिनको अन्तरमा बेरगामोमा मात्र ३ हजार ३३ को यो भाइरसको संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ । स्थानीय वैज्ञानिक पनि के निचोडमा पुगेका छन् भने खेलमा क्रममा धेरै भन्दा धेरै समर्थक कोरोना भाइरसको संक्रमणमा आए र तिनैले आफ्नो परिवारका वृद्धवृद्धामा यसलाई सारे । भाइरसकै कारण मृत्यु हुनेमध्ये बढी उमेरका धेरै छन् । एटलान्टाका गोलरक्षक मार्को स्पोर्टटेलो पनि भाइरसबाट संक्रमित भएपछि क्‍वारेन्टाइनमा छन् ।
त्यस दिन मिलानको खेलका भ्यालेन्सियाका एक तिहाइ खेलाडी र खेल पदाधिकारी पनि भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । यो खेलपछि मात्र इटालीमा दर्शकविहीन बन्द रंगशालामा खेल्नेक्रम सुरु भएको थियो र यो पनि लामो समय टिकेन । अहिले इटाली र स्पेनसँगै युरोपका सबै प्रमुख लिग स्थगित छन् र ती कहिले फेरि सुरु हुने हो टुंगो छैन । यही भाइरसको संक्रमणको डरले सन् २०२० को युरो पनि एक वर्ष पछाडि सार्ने निर्णय भइसकेको छ ।
(सबैभन्दा पहिले यो समाचार स्पेनी पत्रिका मार्काले प्रकाशित गरेको हो । यसलाई पछि इंग्ल्यान्डको डेली मेलले थप विस्तृत रूपमा छापेको छ । त्यसैको स्वतन्त्र अनुवाद ।)
मोवाईल धेरै चलाउनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस आँखा फुट्न सक्छ
मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञहरूले लामो समयदेखि भन्दै आएका छन्,
आँचलको प्रश्न–‘आफ्नो देशको बारेमा बोल्दा नेपाली चेलीले यस्तो सहनुपर्ने ?’
नायिका आँचल शर्माले देश र राष्ट्रियताको बिषयमा बोल्दा नेपाली चेली
प्रेक्षाको ‘सुसाइड नोट’ सामाजिक संजालमा भाईरल
क्राइम पेट्रोल, लाक इश्क,मेरी दुर्गा लगायत शो की नायिका प्रेक्षा
मेलिना राईको एक लाख सहयोग
गायिका मेलिना राईले कोरोना भाइरसको कारण सिर्जित समस्यालाई ध्यानमा